Burcadbadeedda Soomaalida oo sii-daaya shaqaale Hindi oo la socda markab u afduuban muddo sanad ku dhow | raascasayrmedia.com
← Xaaladda qoysaskii ka barakacay Dhoobleey oo laga deerinayo
Dagaalo xoogan oo goor dhoweyd ka qarxay Gobolka Galgaduud. →
Burcadbadeedda Soomaalida oo sii-daaya shaqaale Hindi oo la socda markab u afduuban muddo sanad ku dhow
Burcadbadeedda Soomaaliya ayaa sii daayay 11 badmaaxe oo u dhashay dalka Hindiya kuwaasoo la socday markab ay muddo hal sano ku dhow afduub ahaan loo haystay, sida ay Arbacadii shalay xaqiijiyeen xubno u hadlay dowladda Hindiya.
Markabka ay shaqaalahan Hindida ah la socdeen oo lagu magacaabo MV Rak Afrikana ayay kooxaha burcadbadeedda ah afduubeen 11-kii Abriil 2010, isagoo marayay meel ku dhow xeebaha dalka Seychelles.
Dowladda Hindiya ayaa xaqiijisay in shaqaalaheeda oo caafimaad qaba ay saaran yihiin markab dagaal oo laga leeyahay dalka Spain, kaasoo u wada dalka Hindiya, balse lama sheegin in shaqaalahaas lagu sii-daayay madaxfurasho lacageed iyo in kale.
Saraakiil u hadlay dowladda Hindiya ayaa sheegay in 79 badmaaxe oo u dhashay dalka Hindiya ay haatan gacanta ugu jiraan burcadbadeedda Soomaalida, kuwaasoo la socda toddoba markab oo afduub lagu haysto.
“Waxaa socda wadahadallo lagu sii daynayo lix badmaaxe oo Hindi ah, kuwaasoo la socda markab lagu magacaabo MV Suez,” ayay yiraahdeen saraakiisha u hadlay dalka Hindiya.
Xukuumadda Hindiya ayaa gacanta ku haysa 28 burcadbadeed oo ay bishii lasoo dhaafay ku qabteen howgallo ay ciidamadoodu ka sameeyeen biyaha dalkoda, kuwaasoo la sheegay inay wajihi doonaan sharciga.